जन्मिने बित्तिकै झाडिमा फालेको शिशु अहिले यस्तो छ अवस्था ! [भिडियो हेर्नुहोस] – दैनिक नेपाल न्युज
झापाको दमकमा रहेको लाइफ लाइन अस्पतालमा मात्रै तीन दिनको बेबारिशे शिशु फेला परेको छ । अस्पतालमा रुदै गरेको सानो नानी न बुबा न आमा न आफन्त,कोहि नभएको एक्लो बालक रुदै छटपटाउदै गर्दा कसैले वस्ता गरेनन । तीन दिन सम्म अस्पतालमा भोकले छटपटाउदै रुदै हारगुहार गर्दै गरेको शिशुको के गल्ती थियो र? यो धर्तीमा कोहि रुदै जन्म लिन्छ भने सबै खुशी हुन्छन भोज भतेर पार्टी गर्छन । तर यी अभागी साना बाबुको न कोहि खुशी हुने थिए न त कसैले सम्हालेका थिए । संसारमा धेरै किसिमका दुख पिडामा मानिसहरू छन तर सन्सारमा भर्खर पाइला टेकेको अबोधको दुख सारा सन्सारलाई रुवाउने खालको छ ।
त्यही अस्पतालमा कति बच्चा जन्मिदै थिए कतिका आफन्तले खुशी हुँदै स्याहार गर्दै थिए भने एकातर्फ फोहोरको थुप्रोमा रुदै थिए एक अबोध बालक तर उनको के दोश थियो र! । जन्मदै फोहोरको थुप्रोमा पुगेका अबोध भोकै रुदै थिए जबकि संसारको बारे केही थाहा नै थिएन आमाको माया र साहारा खोज्दै थिए । तर ती रुदै गरेका तीन दिनका नानीलाई भगवान भेटेझै भयो । दमक खरखरे स्थित हाम्रो बाल आश्रम नामक सस्थाले ती तीन दिनको बच्चालाई लगेर पालेर अहिले यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छन तल भिडियोमा हेर्नुहोला मन रुनेछ ।